Saddexda Furaha ee lagu Xallinayo Dhibaatada Teknoolojiyadda weyn ee Suuqgeynta | Martech Zone
Had iyo jeer badiyaa, tiknoolijiyada waxay noqotaa shaqsiyadda guusha. Aniguba dambiile ayaan ku ahay. Tech waa fududahay in la iibsado sidaa darteedna, wuxuu dareemayaa sidii cusbooneysiin deg deg ah! Tobankii sano ee ugu horreeyay sannadihii 2000-meeyadii waxay ku saabsanaayeen soo-galid, sidaa darteed waxaan ugu tartarnay dhanka suuq-geynta suuq-geynta gacmo furan, iyadoo laga dhex tuuray amarro wax iibsasho iyo hagitaanno hagaagsan - waan ka maqnayn oo waxaan la soconnay barnaamijkeenna cusub. Waxaan dharbaaxo ugu dhufnay indhoolayaasha markii ay timaado istiraatiijiyadda maxaa yeelay istiraatiijiyaddu waxay u muuqatay mid gaabis ah; ma ahayn galmo
Suuqgeyntu waxay ku fariisaneysaa miiska dakhliga si kasta oo loo baahdo - waxay ahayd oohin dagaal. Laakiin markii ay sannadihii dhaafeen iyo tallaabooyinkii ROI ee lagu yaboohay si fudud weligood ma iman, oohintaasi waxay isu beddeleen ilmo dhab ah. Way fududahay in loo ooyo Martech markaad eegto soo noqoshada ay abuureyso - in ka yar hal boqolkiiba dhammaan hoggaamiyeyaasha suuqgeynta ee hadda loo beddelo macaamiisha. Taasi waa guuldaro naxdin leh. Oo haddaanan xallin sababta asalka u ah astaamahan, xirfadda suuqgeynta waxay halis ugu jirtaa in la ciribtiro, ku dhowaad intayna bilaabmin.
Waa muhiim inaan weerareyno dhibaatadan asalka asalka ah, maadaama iibiyeyaasha tiknoolajiyada si fiican loo maalgeliyo ay u janjeeraan inay eeda u wareejiyaan wax awood u siinaya iibsashada barnaamijyo badan, sida isbeddelada ku dhaca dhaqanka iibsadaha. Isbedelka kaliya ee runta ah ee loo baahan yahay inuu dhaco waa habka suuq geynta. Si aad ugu guuleysato suuqgeynta, runtiina aad ugu guuleysato ganacsiga, waa inaad si isku mid ah iyo ujeedo ula kac ah u siisaa saddexda qaybood ee xukuma guushaas: istiraatiijiyaddaada, farsamadaada, iyo tabahaaga. Dhammaantoodna waxay u baahan yihiin in la waafajiyo, guddiga oo dhan.
Marka, maxay taasi u egtahay? Farxad ayaad weydiisay. Waa tan qaadashadayda.
Istaraatiijiyad: Domino Koowaad
Macna ma laha cinwaanka shaqadaada, waxaad u baahan tahay inaad fahanto istiraatiijiyadda guud ee ururkaaga. Marka la eego shuruudaha, waa maxay yoolalka ugu dambeeya ee ganacsigu? Suuqleyda, dadka wax iibiya, dadka adeegga macaamiisha… qof kasta oo kooxdaada ka mid ah waa inuu ogaadaa jawaabta su'aashan muhiimka ah. Waa inuu noqdaa waxa ugu horeeya ee qof kastaa ogyahay, fahmayo oo daneeyo. Haddii tan aan si cad loo qeexin, weydii: Maxaan isku dayeynaa inaan gaarno? Maxay yihiin furayaasha furaha muhiimka ah? Caqli ahaan, talaabada xigta waxay ku lug leedahay fahamka waxa aad sameyn karto maalin kasta si aad uga caawiso inaad gaarto istiraatiijiyadda kobaca. Marka la soo koobo, noqo isbedelka aad rabto inaad ku aragto meheradda.
Tani waxay u adeegtaa laba ujeedo:
Si loo hubiyo inaad waqtigaaga ku bixineyso ka shaqeynta waxyaabaha muhiimka ah.
In la joojiyo wax kasta oo aan samaynaynin. Waxay u egtahay mid fudud, laakiin waad layaabi doontaa xaddiga buuq ee ka jira ganacsiyada badankood sababo la xiriira kala-goynta aasaasiga ah ee istiraatiijiyadda iyo xeeladaha. Waxaad arki doontaa isbeddel la yaab leh markii aad bilowdo inaad ka shaqeyso meel istiraatiiji ah marka hore. Halkii aad ka suuqgeyn laheyd inaad ku faraxdo waxqabad hal mar ah, sida martigelinta munaasabad, ka dibna aad la socoto iyada oo aan ujeedo cad laga laheyn sight waad hakan doontaa. Waxaad weydiin doontaa: Maxaan dooneynaa inaan ku guuleysano? Yaan raadineynaa inaan ku mashquulno? Maxay tahay sababta munaasabadani halkii ay u noqon lahayd hindise kale?
Waxaan badanaaba maqalnaa ganacsiyada B2B ee dabagalaya istiraatiijiyadda qiimaha nolosha macaamiisha, taas oo ay ujeedkeedu yahay kobcinta dakhliga iyo ka go'naanshaha macaamiisha jirta halkii ay ka heli lahaayeen kuwo cusub. Mawduuca dharka ee ururkooda oo dhan waa inuu markaa ahaadaa mid ku saabsan saameyn ku yeelashada qulqulka xun. Markaad dejiso istiraatiijiyaddaada, ka dibna dejiso khariidad u dhiganta bilowga, waxaad bilaabi doontaa inaad garaacdo xitaa yoolalkaaga ugu sarreeya cadaab aad uga dhakhso badan sidii aad haddii kale ahaan lahayd.
Geedi socodka: Sidee Loo Sameeyay Sausage
Istaraatiijiyadda ka dib dil ayaa imaanaysa, iftiinka hagaya ee fulintana waa hawl si fiican looga fikiray. Haddii istiraatiijiyaddaadu ay ku saabsan tahay qiimaha nolosha macaamiisha, sida tusaalaha aan kor ku soo adeegsaday, waxaa laga yaabaa inaad laser-diiradda saarto xoog-soo-celin macaamiil oo xoog leh, iyo geedi-socodka horumarinta koontada. Waxaad hoos ugu daadegi doontaa sida loogu suuq geynayo macaamiishaada jira dhammaan heerarka kala duwan ee qaan-gaarnimada, waxaadna khariidayn doontaa sida aad ugu hoggaamin kartid safarka aad niyadda ku hayso.
Tusaale ahaan, ka dib marka qof iibsado xalkaaga - maxaa xiga? Halkan waxaa ku yaal halka aad ku garwaaqsanayso sida garaac kasta oo safarkaaga macmiil ahi u eg yahay. Aynu nidhaahno macmiil ayaa iibsanaya alaabta X tallaabada xigtana waxay siineysaa tababar ku saabsan sida loogu guuleysto. Taas ka dib waxaa laga yaabaa inay macmiil ka noqoto wax ku saabsan sababta ay ugu baahan karaan alaabta Y, iyo u diyaarinta iibsiga iyo hirgelinta. Markaad dejiso hanaan cad oo aad kooxdaada ku haboonaato, oo ay wadato istiraatiijiyaddaada guud, macmiilkaagu wuxuu si fiican u aqoonsan doonaa qiimahaaga. Tani waxay ubaahantahay ujeedo iyo balanqaad adag oo ah in istaraatiijiyaddaada aad safka hore ka dhigato.
Ugu dambeyntiina - tiknoolajiyadaada (Waan ogahay, waxaad rajeyneysay inaan tagno qaybtaan). Marka hore, u fiirso in tiknoolajiyadaadu ay ku timid kaalinta saddexaad ee safkan. Wali waxay ka mid tahay kooxda riyada, laakiin ma ahan ciyaaryahanka bilowga ah. Ta labaad, u aqoonso qaybta ay tahay inay ka ciyaarto - a taageeraya door. Jill Rowley, Sarkaalka sare ee koritaanka Marketo wuxuu caan ku ahaa:
Doqonka qalab wata wali waa doqon.
Waxaan horey u sii qaadi lahaa oo waxaan ku doodi lahaa in xaqiiqadu xitaa ka sii xun tahay, maadaama qofkaasi hada yahay a khatar ah doqon.
Nidaam xumo, oo laga jaray istiraatiijiyad, ayaa ah hubin lagu kalsoonaan karo oo loogu talagalay fashilaadda marka lagu daro miisaanka iyo otomatiga tiknoolajiyada. Waxaad ka fogaan doontaa wadada, dhaqso - waadna dhaawici doontaa sumaddaada. Qiyaastaada sida ay u guuleysatay istiraatiijiyaddaada iyo hababkaaga waa in lagu xoojiyaa tiknoolajiyadaada. Nidaamyadaadu waa inay qabtaan xogtaada, markaa waad falanqeyn kartaa ka dibna waxaad sameyn kartaa go'aanno caqli-gal ah oo ku saabsan haddii aad sii joogi karto koorsada aad ku jirto ama aad saxdo.
Si loo sameeyo shaqadan, suuqgeynta waxay u baahan tahay muuqaal cad oo muuqaal ah oo ku saabsan dhuftoyada kale ee xogta macaamiisha. Kuma filna in waax walba ay si fudud u adeegsato tiknoolajiyadeeda; sidoo kale waa in loo qaabeeyaa qaab si xogta loogu gudbin karo ugana sii gudbi karo waaxyaha si macno leh. Markaad nidaamineysid nidaamyadaada si aad u xoojiso jihadaada istiraatiijiga ah iyo hababkaada, waxaad sare u qaadeysaa ujeedkeeda. Ma noqon karto mid dhalaalaya sida tikniyoolajiyadda looga dhigayo xiddigga, laakiin waxay kaa caawin doontaa inaad hesho hab aad u sii dhammaystirto oo aad runti natiijooyin u hesho.
Ururo badan ayaa si ula kac ah u dhammeeya diiradda mid ka mid ah seddexdaas qaybood oo u oggolaanaya labada kale inay madoobaan. Ama, kaaga darane, waxay isku dayaan inay wax ka qabtaan sedexda dhanba - laakiin silos. Marka labada dhacdo midkood dhacdo, kooxdaada looma dhisin guul. Taabadalkeed, waad dardar galin kartaa dakhligaaga adoo hormarinaya istiraatiijiyad, oo ay ku xigto habka iyo teknolojiyada - si isku xigxiga iyo sadex qaybood oo isku mid ah, koox isku toosan. Tani waa barta macaan, iyo halka aad runtii ka heli doonto guusha qaab u yeelashada - iyo xawaareynta.
Tags: jill rowleyfulinta suuq geyntageeddi-socodka suuqgeyntaistaraatijiyad marketingtikniyoolajiyadda suuqgeyntasuuqohalgankaxidhmooyinTechnology
Qoraa? 7 Dariiqo Wanaagsan oo Buuggaaga looga dhigi karo mid si fiican u iibgeeya Caalamka